Orchid Wellness | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Orchid Wellness | Dagon
Orchid Wellness ဆိုင်လေးသည် အမှတ် (၂၂) ၊ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် မှာတည်ရှိပြီး တနလာင်္နေ့ မှ တနင်္ဂနွေ နေ့ ၊ မနက် ၁၁ နာရီ မှ ည ၁ နာရီအထိ ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ထားသော လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အကောင်းဆုံးသော Health Massage လေးပဲဖြစ်ပါသည်။
ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှု့ ကိုပေးထားပြီး Customers များအတွက် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ လန်းဆန်း တတ်ကြွစေဖို့ အတွက်အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ထို့အပြင် Orchid Wellness ဆိုင်လေးတွင် Package A, B, C, D ဟူ၍ အမျိုးစားခွဲထားပါသေးသည်။ Package A တွင် Foot Massage အတွက် ၁၆,၀၀၀ကျပ်(၆၀မိနစ်) ၊ Package B တွင် Body Massage တွက် ၁၆,၀၀၀ကျပ်(၆၀မိနစ်) ၊ Package C တွင် Full Body Massage အတွက် ၂၃,၀၀၀ကျပ်(၉၀မိနစ်) နှင့် Package D တွင် Full Body Massage အတွက် ၃၀,၀၀၀ကျပ်(၁၂၀မိနစ်) တို့ပဲဖြစ်ပါသည်။
Orchid Wellness ၏ အတွေ့ ကြုံရင့်ကျက်သော ၀န်ထမ်းများ၏ အံ့သြဖွယ်ဝန်ဆောင်မှု၊ ဖော်ရွေမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမွန်မှု နှင့် ပြီးပြည့် စုံသော ဆိုင်အပြင်ဆင် လေးက ဧည့်သည်တိုင်းကို စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်ဝ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများ ကိုပြေပျောက်ချင်ပါက Orchid Wellness ကိုသာတစ်ခေါက်လောက် အရောက်သွားကြည့်လိုက်ပါ၊။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများမှ လူကြီးမင်းအား နွေးေ ထွးစွာစောင့်ကြို နေပါသည်။
11:00 AM - 12:00 AM ( ဘာမှမရှိပါ )
No.(22), Bo Yar Nyunt Road, Dagon Township, Yangon.
အနီးအနား Youk Street Bust Stop မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Pretty Phyu Beauty Spa
Yes Hair Salon (Nawaday)